Warar ku saabsan iPhone | Warka IPhone (Bogga 14)
Apple Pay waxaa hadda lagu heli karaa 50% ganacsatada Mareykanka
Ku dhowaad afar sano ka dib markii la bilaabay Apple Pay, tikniyoolajiyaddan lacag-bixinta wireless-ka ah ayaa hadda laga heli karaa 50% ganacsatada ku nool Mareykanka.
Apple wuxuu liis garayaa ilaha muusikada ee la jaan qaadi kara HomePod
Koobka Cupertino way kufiicnaadeen inay la wadaagaan liistada ilaha codka ee la jaan qaada HomePod waanan ku faahfaahin doonnaa qoraalkan.
Cidina ma weydiisanin, laakiin Microsoft Edge ayaa imaan doonta iPad-ka
Tani waa sida kooxda horumarinta Microsoft Edge uga baxsatay in arjigu horeyba tijaabooyin ugu jiray isla markaana uu dhawaan ku imaan doono iPad-ka.
Apple wuxuu bilaabayaa Boos celin Barnaamijka Bedelaada Batroolka iyada oo loo marayo Barnaamijka Taageerada ee Kanada
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabi karaan inay aqbalaan boos celinta barnaamijka beddelka batteriga iyada oo loo marayo barnaamijka taageerada iOS laftiisa.
Apple waxay uga jawaabtaa Dowlada Mareykanka baaritaanka furan
Waqti badan kuma qaadan in shirkadda Cupertino ay ku soo baxdo baaritaanka furan, bal aan eegno macluumaadka la wadaagay.
Codsiyada IPad ayaa imanaya macOS sanadkan
Shirkadda Cupertino waxay qorsheyneysaa inay sameyso codsiyada iOS-ka ee iPad-ka oo la jaan qaadaya macOS ka hor dhamaadka sanadka.
ARKit wali waa la yaab, laakiin wax badan oo dheeraad ah oo leh nuqulkeeda 1.5
Nooca 'ARKit' 1.5 wuxuu hagaajiyaa dhinacyada xiisaha leh ee aaladda wuxuuna ku daraa kuwo cusub oo ka dhigaya kuwa horumariya inay abuuraan codsiyo wanaagsan.
Beta-ka xiga ee iOS 11.3 wuxuu noo ogolaanayaa inaan joojino yareynta waxqabadka
Shirkadda Cupertino waxay qorsheyneysaa inay si dhakhso leh ugu darto deactivation ama qaabeynta cusbooneysiinta beta 11.3 ee soo socda
Nintendo wuxuu ku dhawaaqay nooc ka mid ah Mario Kart ee casriga ah
Nintendo waxay ku dhawaaqeysaa ciyaarteeda cusub ee qalabka mobilada oo aan wax badan ka badnaan doonin isla markaana aan ka yareyn doonin nooca Mario Kart ee imaan doona 2019
Isticmaalka HomePod ee awoodda buuxda waa ka yar yahay tan nalka LED-ka
Isticmaalka tamarta ee HomePod nagu siinayo awood buuxda, muusigga oo garaacaya, wuu ka hooseeyaa kan ay soo bandhigto guluubka isticmaalka hooseeya.
Apple ayaa Telegram ka saareysa App Store si ay dib ugu soo muuqato saacado kadib
Telegram ayaa laga saaray App Store sida uu sheegay agaasimaheeda gaarka ah uu ku xaqiijiyay bartiisa Twitter-ka, iyadoo aan la xaqiijin goorta ay soo laabaneyso.
Apple wuxuu joojiyaa saxiixa dhammaan noocyada kahor iOS 11.2.5
Ragga ka socda Cupertino waxay joojiyeen saxiixa macruufka 11.2, iOS 11.2.1 iyo iOS 11.2.2, si aanan mar dambe hoos ugu dhicin si aan uga faa'iideysanno xabsi xabsi oo mala awaal ah oo aragti ahaan ku dhow inuu soo baxo.
Facebook wuxuu daabacaa 7 mabaadiida asturnaanta wuxuuna ku siin doonaa xakameyn badan oo ku saabsan xogtaada
Facebook wuxuu ku daabacaa 7 qodob mabaadi'diisa ku saabsan asturnaanta xogta wuxuuna doonayaa inuu ka caawiyo isticmaaleha inuu si aad ah u xakameeyo waxa ay ku wadaagaan internetka
Rubuca ugu fiican taariikhda Apple wuxuu yimid mahadsanidiisa iPhone X
Gacanta oo la socota € 1.100 oo ah iPhone X kasta, Apple ayaa ku guuleysatay inay gaarto waxa illaa iyo hadda ugu wanaagsan rubuc maaliyadeed taariikhda.
Barnaamijka cusub ee HomePod ayaa si toos ah uga cusbooneysiin doona barnaamijka Home
Habka hawlgalka HomePod waa la sifeeyaa. Wax walba waxaa lagu xakameyn doonaa barnaamijka Guriga halkaasoo aan ku yeelan doonno suurtagalnimada inaan cusbooneysiino barnaamijka aaladda cusub ee Apple.
Apple wuxuu daahiyaa isbeddelada waaweyn ee iOS si uu diirada u saaro ciladaha
Dhowr bilood ka dib qaladaadkii software-ka ee la isku khilaafsanaa, Apple waxay umuuqataa inay go'aansatay inay diirada saarto waxqabadka waxayna dib u dhigeysaa qaar ka mid ah iOS 12 cusub
Apple wuxuu ahaa shirkadda iibsatay inta badan processor-radii 2017
Shirkadda Cupertino waxay noqotay maal-galiyaha ugu weyn ee semiconductor-ka dhammaan 2017-ka.
IPhone-ka 2018 wuxuu gaari karaa 4 GB oo RAM ah
Apple sidoo kale waxay ku biirtay siyaasadan kobaca iyadoo lagu darayo 4 GB oo RAM ah aaladaha la bilaabay intii lagu jiray 2018.
Isticmaalayaasha HomePod ee leh 'iTunes Match' ama 'Apple Music subscription' ayaa awood u yeelan doona inay maktabadooda uga helaan Siri
Si tartiib tartiib ah, ragga ka socda Cupertino ayaa naga saaraaya shaki. Wararkii ugu dambeeyay waxaa laga helaa isku waafaqsanaanta iTunes Match iyo maktabada ku keydsan daruuraha HomePod, maktabad aan ka maamuli karno Siri
Hada laga bilaabo waxaad awoodi doontaa inaad ku raaxeysato WhatsApp-ka dhexgalka isticmaalaha CarPlay, adigoo awoodi kara inaad ku hesho ogeysiisyo shaashadda gaarigaaga ah
OverCl0ck, jeelka cusub ee Apple Watch ee loogu talagalay watchOS 3
Sparkes ayaa sii daayay jeel cusub oo loogu talagalay watchOS 3, nidaamka hawlgalka ee Apple Watch, oo loo yaqaan 'OverCl0ck'. In kasta oo aysan shaqeyneyn, haddana wadashaqeynta kharibayaasha kale waxay ka caawin doontaa horumarinteeda.
IPhone X Plus ayaa imaan lahaa sanadkan sida uu sheegayo Ming-Chi Kuo
Inta lagu jiro 2018 waxaan lahaan doonnaa laba nooc oo ah khadka iPhone X midkoodna waxaa loo aqoonsan doonaa iPhone X Plus wuxuuna yeelan doonaa 6,5 inji
Baytariyada ku jira "L" waxay noqon lahaayeen mustaqbalka iPhone-ka
Apple waxay ka shaqeyneysaa soo iibinta baytariyada leh qaababka "L" jiilka cusub ee aaladaha ay ka bilaabeen suuqa.
watchOS 4.3 waxay maktabadaada muusikada ee iPhone ku soo celineysaa Apple Watch
Waxay ahayd mid ka mid ah isbeddellada aan la fahmi karin ee xanaaqa badan ee watchOS 4, laakiin ugu dambeyntii waxay umuuqataa in Apple ay siisay ...
Apple wuxuu soo saaray dhibcaha ugu horreeya ee HomePod cusub
Ragga ka socda Cupertino waxay bilaabayaan meelaha ugu horreeya ee HomePod cusub, fiidiyowyo cusub oo ururiya fasiraadda garaafka ah ee codka taas oo ay nagu qancinayso astaamaha ku hadla af-hayeenka cusub ee Apple.
IPhone SE 2 ayaa si dhaqso leh ku imaan kara isla markaana ku shubi kara wireless
Apple-ka iPhone SE 2 wuxuu yeelan karaa xukun bilaa wireless sida iPhone X ama iPhone 8, laakiin Apple waxay ka tagi doontaa dhismaha qoto dheer ee qotodheer kaas oo ka xayuubin doona dhamaadka baaritaanka 3D.
Gawaarida iswada ee Apple ayaa sii kordhaya tirada
Waxaan cadeyneynaa in Apple ay ku sharraxeyso mashruuceeda Titan si dhab ah markii warbaahinta qaar ay ku dhawaaqaan in ...
Sonos waxay kaga jawaabaysaa qiimo dhimis bilowga HomePod
Shirkad sida Sonos oo kale ah ayaa sii ahaan kareysay, sidaa darteedna waxay bilowday dhaqdhaqaaq ay ku soo jiidaneyso iibka soo bandhigiddan.
Isbedelada habka loogu bixiyo FaceID-ka iOS 11.3
Tani waa sida iPhone X ay u heshay xoogaa isbeddel ah habka aan u isticmaalno FaceID si aan ugu sameyno macaamil App Store meelaha kale.
Midowga Yurub wuxuu Qualcomm kula macaamilayaa heshiis dhan 1.000 billion euros
Marka laga reebo dacwada la sugayo, Qualcomm ayaa hada heshay ganaax dhan 997 milyan oo yuuro oo ka timid Midowga Yurub.
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu rakibi karto shahaadadaada dijitaalka ah iOS si qaab layaab leh oo fudud oo aad ku aqoonsan karto maamulka dowladeed.
Qaabeynta HomePod waxay la mid noqon doontaa dhaqaajinta AirPods
Apple waxay abuurtay nidaam markaa si fudud u keenaya iPhone kana qaadaysa tillaabooyin fudud oo fudud si ay u bilawdo isku xidhka HomePod, iyagoo adeegsanaya iCloud Keychain iyo Siri.
Maxaa ka dhigaya HomePod marka laga reebo kuwa la tartamaya? Tim Cook ayaa sharraxaya
Waxaan sii wadeynaa bingo-ka HomePod, af-hayeenka caqliga badan ee ka socda shirkadda Cupertino wuxuu sii wadaa inuu qabsado cinwaannada cinwaannada oo dhan ...
Apple waxaa ku jira farriimaha ku jira iCloud ee iOS 11.3
Apple waxay ku dartay fariimaha kujira ikhtiyaarka iCloud beta-kii ugu horeeyay ee iOS 11.3 kadib markay ka fariisatay noocyada hordhaca ah ee iOS 11.
Apple waxay sheeganaysaa in Siri loo isticmaalo maalin kasta in ka badan 500 milyan oo qalab
Apple waxay hadda shaacisay tirooyinka isticmaalka Siri, tirooyinka na tusaya sida in ka badan 500 milyan oo isticmaaleyaashu si joogto ah ugu isticmaalaan Siri
Dhamaan wararka ku jira iOS 11.3 Beta 1
Apple waxay soo saartay Beta-kii ugu horreeyay ee iOS 11.3 iyadoo leh isbeddelo muhiim ah sida Animoji cusub iyo hagaajinta maareynta batteriga, iyo kuwo kale.
Instagram waxay ku darsataa taageerada GIFs sheekooyinkeeda caanka ah
Instagram waxay cusbooneysiineysaa codsigeeda iyadoo lagu darayo taageerada GIF-yada leh tiknoolajiyada GIPHY sheekooyinkeeda caanka ah si looga dhigo kuwo aad u badan oo la qabatimo iyo madadaalo leh.
ITunes ayaa iibsata, podcasts, iyo xitaa Beats 1, dhammaantood waxay ku yaalaan HomePod
HomePod wuxuu awood u yeelan doonaa inuu ciyaaro boodhadhkeena, dhageysto shabakadda raadiyaha ee Beats 1, iyo xitaa inuu wax ka iibsado iTunes.
Bixinta Pepephone-ka mobilka iyo fiber waxay runti noqoneysaa "mid aan la soo koobi karin", nala baro
Pepephone waxay bixisaa munaasabado badan wax ka badan wax ka jaban, waxay sidoo kale bixisaa kalsooni ah in aysan jirin wax qarsoon oo ka dambeeya lambarradan kordhinaya biilkaaga dhammaadka bisha.
Ka fekerida HomePod? Waxaan rajeyneynaa inaad taqaanid Ingiriisiga
Sida ku dhacday noocyada kale, HomePod waxaa lagu heli karaa oo keliya Ingiriis maalmaha ugu horreeya ee la bilaabi doono
Netflix waxay aaminsan tahay in Apple ay bixin doonto adeeggeeda fiidiyoowga ah ee ay weheliso Apple Music
Wicitaankii ugu dambeeyay ee dakhliga ee ay shaacisay Netflix, shirkaddu waxay sheegtay in Apple ay damacsan tahay inay si wada jir ah u soo bandhigto Apple Music iyo adeegga fiidiyoowga ee ay ku shaqeyneyso.
HomePod waxaa laga heli doonaa Febraayo 9 Maraykanka, Australia iyo Boqortooyada Midowday
Hore u-dalbashada af-hayeenka caqliga badan ee Apple, HomePod, wuxuu bilaabmi doonaa 26-ka Janaayo suuqgaynta rasmiga ahna waxay bilaaban doontaa Febraayo 9. In kasta oo kaliya saddex dal, xilligan.
Gboard wuxuu kugu martiqaadayaa inaad dirto GIF-yada wajigaaga si deg deg ah oo fudud
Gboard, kiiboodhka Google ee loogu talagalay IOS, kaas oo hadda soo kordhiyay shaqooyin iyo karti cusub oo ka dhigaysa mid xiiso badan.
Apple wuxuu joojinayaa iPhone X dhamaadka 2018
Nolosha iPhone X? Falanqeeyayaashu waxay filayaan inuu aad u gaaban yahay, waxayna si toos ah u tilmaameen in Apple ay ka saari doonto buugga markii la soo bandhigayo cutubyada cusub ee sanadkan 2018
John Bennett wuxuu ka hadlayaa xiriirka wanaagsan ee FBI iyo Apple
Madaxa waaxda FBI-da ee San Francisco, John Bennett, ayaa ku tilmaamay xiriirka ay hay'addu la leedahay shirkadda Big Apple mid aad u wanaagsan, isagoo meel iska dhigaya dhibaatooyinkii soo maray.
Tim Cook: Ma aaminsani in isticmaalka xad-dhaafka ah ee tikniyoolajiyadda
Tim Cook, oo ah agaasimaha guud ee Apple, ayaa fikirkiisa ka dhiibtay arrintan, sinnaba sinaba uma ahan wax taban.
Infuse wuxuu ku biirayaa jahwareerka iPhone X
Infuse, ciyaaryahanka ugufiican iPhone-keena, iPad-ka iyo Apple TV-ga, ayaa ugu dambeyn lagu casriyeeyay Habka Mugdiga ah ee laga filayo iPhone X
TSMC waxay aaminsan tahay in iibinta taleefoonada dhamaadka sare hoos u dhici doonaan sanadkaan 2018
Sida laga soo xigtay maamulayaasha TSMC, iibinta taleefannada gacanta ee aadka u sarreeya ayaa hoos u dhici doona sanadkan 2018. Dhex-dhexaadka iyo dhamaadka-hoose ayaa kor u kici doona
Kristen Wiig ayaa ku biiraya Aktarada jilaya Filimaanta taxanaha ah ee adeegga baahinta Apple
Aktarada majaajillada ah ee Kristen Wiig ayaa jilaysa majaajilo cusub oo loogu talagalay adeegga fiidiyowga ee soo dejinta ee Apple ay diiradda saarayso dadaalkeeda.
$ 30.000 oo loogu talagalay astaanta Macintosh sanduuqa
Sidan ayaa sawirkan "Macintosh" ah ugu dambayntii uu ugu dambayn karaa in ka badan 30.000 oo lagu daldalo qolka fadhiga qofkii diyaar u ah inuu bixiyo.
Apple waxay horeyba u xallisay dhibaatada "xiriiriyaha inkaaran"
Sida muuqata saaxiibbadii Cupertino ayaa ku mashquulsanaa xallinta dhibaatadan, beta-kii ugu dambeeyay wuxuu umuuqdaa inuu xallinayo.
WhatsApp wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka ciyaarto fiidiyowyada YouTube-ka sheekada
Hadda waxaan si toos ah ugu ciyaari karnaa fiidiyowyada YouTube wadahadalka iyada oo aan loo baahnayn inaan ka tagno, ama joojino sheekada.
WhatsApp ee Ganacsiga ayaa yimid, boodhadhka Adeegga Macaamiilku wuxuu u guuraa sheekooyinka caanka ah
Ragga ka socda WhatsApp ugu dambeyntii waxay ku dhiirradeen inay bilaabaan WhatsApp for Business, barnaamijka gaarka ah ee shirkadaha si ay u bixiyaan taageerada adeegga macaamiisha iyada oo loo marayo barnaamijka farriinta deg dega ah ee caanka ah.
Dhawr bas oo shaqaalaha Apple ah ayaa la dhagxiyey
Qaar ka mid ah basaska ay Apple u diyaariso shaqaalaheeda ayaa la dhagxiyay intii ay ku guda jireen safarada ay ku tagayaan xafiisyada Apple ee Cupertino.
Apple waxay gaadhay kaalinta lixaad ee Top 100 ee shirkadaha tiknoolajiyada
Ragga ku jira Apple sifiican ugama aysan bilaabin darajo cusub oo aan ka helno 100ka shirkadaha farsamada ugu muhiimsan adduunka.
Waxaan awoodi doonaa inaan aragno caafimaadka baterigeena oo aan ku hagaajino waxqabadka cusboonaysiinta mustaqbalka
Tim Cook ayaa xaqiijiyay in Apple ay hagaajin doonto batteriga iPhone iyo arrinta waxqabadka cusbooneysiinta soo socota.
Mustaqbalka buugga xiriirka waxaa la yiraahdaa Universale
Ugu dambayntii waxaan heli karnaa xog-ururin guud, halkaas oo aan ka heli karno lambar taleefan kasta, oo shaqsiyaad ama shirkado ah, si aan ula soo xiriirno mar kasta oo aan u baahanno, iyadoon loo eegin ajandaha taleefannada casriga ah.
Bangiyada cusub waxay yimaadaan Apple Pay labadaba Mareykanka iyo Aasiya
Kuwani waa bangiyadii ugu dambeeyay ee ku soo biiray nidaamka lacag-bixinta ee xiriirka aan lahayn ee ka socda Cupertino ee dalalka aan kor ku soo sheegnay.
Sida loogu arko taariikhda iibsigaaga Apple Pay
Waxaan dooneynaa inaan ku tusino sida aad u arki karto taariikhda kharashaadka lagu sameeyay kaarkaaga ee Apple Pay si toos ah iPhone.
Apple iyo HBO waxay u tartamaan xuquuqda baahinta taxanaha soo socda ee JJ Abrams
HBO iyo Apple labaduba waxay dalbanayaan xuquuqda baahinta JJ Abrams ee taxanaha soo socda ee sayniska.
Inventec ayaa ku wareejin lahayd Apple million-ka ugu horreeya ee HomePods
Inventec, mid ka mid ah iibiyeyaasha 'HomePod' ee Apple, ayaa u diri karay malaayiintii unug ee ugu horreeyay Cupertino ganacsigeeda soo socda.
IPhone-ka ayaa ahaa aaladda ugu firfircoon Maraykanka gudihiisa rubucii ugu dambeeyay ee 2017
Maalmo gudahood markii la daabacay natiijooyinka Apple, warbixin dibadeed ayaa xaqiijin doonta in iPhone uu ahaa aaladda ugu firfircoon inta lagu gudajiray rubucii ugu dambeeyay ee 2017.
Fadeexad kale oo ka jirta alaab-qeybiyeyaasha Apple, ma buuxinayaan heerarka amniga
Sida muuqata alaab-qeybiyeyaasha qashinka iyo qashinku uma hoggaansamayaan heerarka tayada ee ay aasaaseyso shirkadda Cupertino.
Xogta iPhone waxay hoos u dhigi doontaa cabirka daabacadaha mustaqbalka
Sida laga soo xigtay macluumaadka, "uruurada" iPhone-ka ayaa hoos u dhigi kara cabirka daabacadaha mustaqbalka iyada oo ay ugu wacan tahay isdhexgalka Face ID si toos ah kamaradda hore.
Apple way ka tanaasushay oo waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala WeChat inay dib ugu soo sheegaan barnaamijka
Iyagoo wajahaya dalabyada Tencent, milkiilaha WeChat, Apple waxay ku egtahay bixinta isla markaana markale waxay aqbashaa talooyinka ku dhex jira barnaamijka iyada oo laga dhaafayo guddiyada Apple.
IOS App Store wuxuu dhaafi doonaa warshadaha filimada sanadka 2018
Waxa inaga yaabiyey ayaa ah baaxadda ganacsiga AppStore inta lagu gudajiray 2018, waxaa lafilayaa inay dhaafto warshadaha filimada.
Apple wuxuu xusaa Martin Luther King Jr Day isagoo qurxinaya degelkiisa internetka
Isniinta saddexaad ee bisha Janaayo waxaa sanad walba la xusaa maalinta Martin Luther King Jr, oo ka mid ah dadka ugu saameynta iyo muhimka badan dhinaca xuquuqda madaniga Mareykanka.
Wareegyada Dabiiciga ah, codsi ka hortagga uurka ee xarunta khilaafka
Codsi ballan qaadaya inuu waxtar u leeyahay sida hababka uurka ee ugu horreeya looga hortago ayaa udub dhexaad u ah khilaafka
Dowladda Hindiya waxay gogol xaar u tahay furitaanka Dukaammada Apple
Dowladda Hindiya ayaa si mug leh wax uga bedeshay xaddiga maalgashi ee shirkadaha shisheeye ay dalka ku sameyn karaan, min 49% illaa 100%, taas oo u oggolaan doonta Apple inay ka furato Apple Store-kii ugu horreeyay dalka iyadoo aan loo iibgeynin wax soo saarka dalka.
Fiidiyowgii ugu horreeyay ee Apple Park ee 2018 wuxuu horey u muujinayaa bay'ada cagaaran ee ku hareeraysan
Kahor bilowga ugu dambeeya ee Apple Park, fiidiyow cusub oo duuban oo wata diyaarad Drone ah ayaa lagu sifeeyey halka aan ku arki karno xaaladda saqafka cagaaran ee Apple Park.
Apple waxay xaqiijineysaa farriimaha hijrada xogta iCloud inay yihiin cilad
Qaar ka mid ah isticmaaleyaasha ka baxsan Shiinaha ayaa sidoo kale helaya digniin ah in xogtooda loo wareejinayo Shiinaha, laga bilaabo Cupertino oo xaqiijineysa inay qalad tahay.
Apple Watch sidoo kale laguma soo dhaweynayo Aqalka Cad.
Golaha amniga ee Aqalka Cad ayaa sidoo kale liis madow ku qoray aaladaha shaqsiyadeed ee loo oggolaaday saacadaha casriga ah
Jilicsanaanta ku jirta WhatsApp waxay ka dhigeysaa wada-hadallo qarsoodi ah kuwo aan waxtar lahayn
Sidan ayaa ah cillad amni oo dhowaan laga helay WhatsApp waxay ka dhigi kartaa wada sheekaysigaaga qarsoodi ah gebi ahaanba waxtar la'aan.
Electra, JAILBILAAD cusub oo uu sii daayay Coolstar oo loogu talagalay iOS 11-11.1.2
Coolstar, oo ah horumariye caan ah, ayaa sii daayay Electra, oo ah xabsi loogu talagalay iOS 11 illaa iOS 11.1.2. Khasaaraha kaliya ayaa ah in uusan ku rakibin Cydia qalabka.
Way argagaxday Hawaii markii ay yimaadeen fariimaha deg degga ah madaama ay gantaalo ku garaaceen iPhones
Fowdo ka dhacday Hawaii ka dib markii taleefannada iPhones si khaldan ay u bilaabeen helitaanka digniino la xiriira hanjabaad gantaal oo dadka laga codsado inay nabad raadsadaan
Apple wuxuu noqonayaa kii afraad ee sameeya kumbuyuutar, kadib markii uu iibiyey 20 milyan oo unug sanadkii 2017
Sanadkii la soo dhaafey, iibinta Mac, sida ku xusan qiyaasaha bilowga ah iyo maqnaanshaha xaqiijinta rasmiga ah, waxay gaareen ku dhowaad 20 milyan oo unug.
Siri wuxuu bartaa xaqiiqooyin cusub oo kusaabsan tartamada golf iyo tennis
Kaaliyaha macmiilka ee macruufka, Siri, wuxuu bartay macluumaadka ku saabsan tennis-ka iyo tartamada golf-ka ugu muhiimsan iyo sidoo kale astaamaha ciyaartoyda ugu fiican xilligan.
Beddelka batteriga IPhone 6 ayaa dib loo dhigay illaa Maarso-Abriil
Baahida badan ee ay qabaan dadka isticmaala ee doonaya inay ka faa'iideystaan ​​barnaamijka beddelka bateriga ayaa si aad ah loogu guuleystay in waqtiga sugitaanka lagu kordhiyo laba bilood.
Apple waxay sii wadi doontaa inay ku iibiso alaabada cusub ee AirPort Dukaamada Apple
Xaqiiqda ah in Apple ay joojisay iibinta wax soo saarkeeda AirPort Wi-Fi macnaheedu maahan inay ka tagtay badeecooyinka leh teknolojiyaddan.
IPhone X ayaa ka dambeeya iibka Spain
IPhone X muu muujinin tirooyin soo jiidasho leh dalka gudihiisa, halkii ay kaga tagi lahaayeen xog niyad jab leh Spain iyagoo tixgelinaya hal-abuurnimadooda.
Cusbooneysiinta WhatsApp-ka waxay ka badneyd kaliya "hagaajinta cilladaha"
Waxaan had iyo jeer jecel nahay inaan si qoto dheer waxyar uga eegno wararka WhatsApp, kanna waxaan ka helnay mid muuqaal faahfaahsan leh, ku beddelo buluug cawl.
Iibinta IPhone X waxay ka caawisaa Kobaca IOS adduunka oo dhan
Falanqeeyayaashu waxay isku raaceen in iibka iPhone X uu kor u qaaday kobaca macruufka ee 2017, laakiin kaliya Shiinaha.
Apple waxay si toos ah ugu wareejineysaa xogta iCloud ee isticmaaleyaasha Shiinaha dalkooda
Apple waxay qaadatay go'aanka ay ugu wareejineyso Shiinaha adeegaha ay kujiraan xogta isticmaaleyaasha si sax ah wadanka Aasiya.
Dhabar jab dhaqaale oo cusub oo soo food saaray shirkadda Apple ee UK oo bixin doonta 136 milyan oo ginni
Waana inaanan ka tagin mid aan ku galno mid kale, maareeyayaasha Apple waa inay ka fikiraan markay arkaan ...
Pokémon GO wuxuu joojin doonaa helitaanka aaladdaas aan ku habboonayn iOS 11
Niantic wuxuu ku dhawaaqay in aaladahaas aan cusbooneysiin karin iOS 11 aysan awood u yeelan doonin inay galaan Pokémon GO cusbooneysiinta soo socota.
Alpine waxay ku soo bandhigeysaa shaashadeeda sabeynta Apple CarPlay ee CES
Ilaa maanta, Alpine wuxuu sii wadaa inuu noqdo mid kamid ah magacyada ugu caansan adduunka dhawaqa ee ...
Fibaro Oo Soo Bandhigay Beddelaad SmartKi Loogu Talo Galay HomeKit Loogu Yeedhay Badhanka
Fibaro ayaa hadda soo bandhigay Button-ka, badhan kaas oo aan isugu geyn karno tallaabooyin kala duwan hal badhan, ficilada ku habboon aaladaha ku xiran HomeKit.
Sida ay ku warantay warbaahinta maxaliga ah dukaanka waxaa looga saaray qiiq sun ah oo ka dhashay baytariga xaalad xun.
JUUK Velo waa suun bir ah oo qiimo sare leh oo loogu talagalay Apple Watch kaas oo doorta naqshad casri ah laakiin leh midabbo kala duwan oo ka duwan saacadeena.
LG ayaa heleysa tirooyin isku dhafan sanadihii la soo dhaafay iyadoo ay ugu wacan tahay ujeedka Apple inuu si tartiib tartiib ah uga sooco ...
Colgate wuxuu kaloo ku biirayaa AI si gaar ah Apple Store
Burushka caday ee Elektaroonigga ah ee loo yaqaan 'Colgate Smart Electronic Brush' waa buraashka cadayga 'Artificial Intelligence' oo si gaar ah loogu iibiyo Dukaanka Apple.
Nice Midab Leh Oo Lagu Kulmo Calaamadaha Ayaa Ka Muuqda Dukaankii Ugu Horeeyay Ee Apple Ee Kuuriya
Apple waxay diyaarineysaa bilowga Dukaanka cusub ee Apple ee Seoul iyadoo lagu dhejinayo boodhadh dhaqameed si ay noo dhiirrigeliso taasoo muujineysa inay ku faraxsan yihiin inay nala kulmaan.
Apple si loo hagaajiyo xakamaynta waalidka ee wajiga hubin la'aanta maalgashadayaasha
Warqadda maal-gashadaha ee usbuucii la soo dhaafay ee ku saabsan dhibaatada caafimaad ee dadweynaha ee ku hareeraysan carruurta iyo adeegsiga teknoolojiyada cusub ayaa ku horseeday Apple inay sheegato inay ka shaqeyneyso astaamo cusub oo loogu talagalay xakameynta waalidkood.
Cilad hore iyo hal iPhonekiiba: Shuruudaha beddelka batteriga
Tani waa sida shirkaddu u rabto inay ku xadido beddelka baytariyada iyada oo loo marayo taxane ah shuruudaha iyo qaababka si looga fogaado kuwa macaash doonka ah.
IPhone SE 2 waxaa wehelin doona gadaal gadaashiisa
IPhone SE 2, waa taleefan ay kujiraan galaas gadaal sida ku cad xogaha ugu dambeeyay.
Shaki badan oo ku saabsan tirada iPhone X ayaa la iibiyay ilaa maanta
Falanqeeyaha CLSA wuxuu xaqiijinayaa in adeegsadayaashan horeyba u doonayey iPhone X bishii Diseembar 2017 ay horey u gaareen, sidaas darteed tirooyinka rubuca maaliyadeed ee ugu horreeya ee Apple kama sarrayn doonaan kuwa rubucii ugu dambeeyay ee 2017.
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 11.2.2 ee loogu talagalay cilladaha hagaajinta iPhone iyo iPad
Apple wuxuu sii daayaa iOs 11.2.2 si loo hagaajiyo cilladaha nabadgelyada ee 'Meltdown' iyo 'Specter' iyo sidoo kale cilladaha kale ee amniga ee taageeraya iPhone, iPad, iyo iPod Touch.
Apple waxay bilawday sanadka inay aruuriso, laga bilaabo taariikhda aan daabacnay maqaalkan, in kabadan 23 dacwadood oo ay soo gudbiyeen isticmaaleyaasha iyo ururada oo lagu khiyaaneeyey qaladka Apple iyo macluumaad la'aanta arintaan ku saabsan.
Spotify Wajiyadda $ 1.6 Billion Dacwad
Daabacaadda Wixen Music Publishing ayaa ka dacwaysay shirkadda 'Spotify' maxkamadda federaalka ee gobolka Kaliforniya oo ay ku heesato heesaheeda bilaa liisan Waxay codsanayaan magdhow 1.6 bilyan oo doolar iyo tallaabooyin taxaddar ah.
Apple wuxuu ku sharxayaa docuseries iyo tan ugu horreysa waxay noqon doontaa 'Home'
Apple waxay rabtaa inay gasho qaybta taxanaha dokumentiyada. Oo sidii lagu yiqiinay, cinwaanka ugu horreeya ee yimaaddaa wuxuu noqon doonaa Hoyga
Jimmy Iovine inuu ka tago Apple bisha Ogosto
Mid ka mid ah maamulayaasha Muusikada ee Beats ee ku soo biiray Apple ka dib markii ay la wareegeen ayaa ugu dambeyntii ka tagi doona shirkadda ku taal Cupertino bisha Ogosto ee soo socota.
Dukaanka App wuxuu jabiyaa rikoor: 300 milyan oo iib ah Sannado Cusub
Apple ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in intii lagu jiray Maalinta Sannadka Cusub in ka badan 300 milyan oo doolar lagu ururiyey iibsashada dadka isticmaala adduunka oo dhan.
Barnaamijka Apple Developer, waa u bilaash hay'adaha aan macaash doonka ahayn
Tani waxay ahayd wax ay ahayd inay soo dhowaato ama goor dambe tan iyo markii shirkadda Cupertino lafteeda ay la socodsiisay ...
Apple waxay xaqiijineysaa in Specter iyo Meltdown ay saameynayaan iPhone, iPad iyo Mac
Apple waxay sii deysaa bayaan rasmi ah oo ay ku xaqiijinayso in kombiyuutaradiisa ay u nugul yihiin jilicsanaan la yaqaan oo hoos imanaya Meltdown iyo Specter
TSMC wuxuu noqon karaa midka kaliya ee wax iibiya Apple ee sanadka soo socda A12
Sannadka soo socda Apple waxay damacsan tahay inay soo saarto qalab cusub oo la imaan kara qalab cusub oo A12 ah oo lagu soo saaray Cupertino, laga yaabee cidda kaliya ee alaab-qeybiyahaan bixisa inay tahay Taiwanese TSMC.
Imaatinka macruufka 11.2.5 hadda Siri wuxuu kugula talin doonaa Podcasts
Soo helitaankii ugu dambeeyay wuxuu si toos ah farta ugu fiiqayaa Podcasts-ka markii aan Siri weydiinay warka maalinta.
IMac Pro wuxuu ka koobnaan karaa A10 Fusion coprocessor gudaha
Ilmadii ugu dambaysay ee taxaddar leh ee caloosheeda ayaa soo saartay shirkad cusub, oo dhammaantood tilmaamaya inay noqon karto A10 Fusion.
Apple inay bixiso natiijooyinka maaliyadeed ee ugu horreeya sanadka sanadka Febraayo 1
Febraayo 1 waa maalinta ay Apple u dooratay inay si rasmi ah ugu dhawaaqdo natiijooyinka maaliyadeed ee rubuca koowaad ee maaliyadeed ee Big Apple.
Apple wuxuu iibsadaa Buddybuild si loo hagaajiyo qalabka wax soosaarka ee iOS
Shirkadda ugu horreysa ee Apple iibsatay 2018 waa Buddybuild, oo ah gabadh da 'yar oo loogu talagalay fududeynta hannaanka isgaarsiinta ee u dhexeeya server-yada, dukaamada dalabka iyo kuwa horumariya
Maya, taleefankaaga iPhone uma diri doono booskaaga booliiska qaabka SOS
Mid ka mid ah shaqooyinkaas aysan iPhone haysan waa inuu booskaaga booliiska ugu diro adigoo riixaya badhanka Power-ka shan jeer.
Baytariyada IPhone waa la beddeli doonaa xitaa haddii ay dhaafaan ogaanshaha cudurka Apple
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in Apple ay u gudbin lahayd shaqaalaha dukaamadeeda si ay u badasho dhamaan baytariyada dadka isticmaala ee codsada, xitaa hadii ay ku sugan yihiin xaalad qumman.
Waxaa jira 40% fursad ay Apple ku heli karto Netflix, sida ay qabaan falanqeeyayaasha
Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha Citi, waxaa jira 40% fursad ay Apple ku heli karto Netflix, oo ah barxadda leh barmaamijka ugu ballaadhan adduunka.
Tim Cook wuxuu kasbaday sanadka oo dhan inuu dhamaado 102 milyan oo doolar, kuwaas oo 3 kaliya ay yihiin mushaarkiisa
JAILBREAK 11 ka iOS ah ayaa ka nool sidii hore. Saurik, oo ah abuuraha Cydia, ayaa xaqiijiyay in la bilaabay seddex qalab oo lagu sameeyo.
IFixit Qiimaha Slashes Qiimaha Qalabka Beddelka Baytarigeeda ee Jawaabta Tallaabada Apple
Apple waxay go’aansatay inay bedesho baytariyada iphone-ka oo gaabis ah. iFixit wuxuu yareyn doonaa qiimaha xirmooyinka si uu batteriga ugu bedelo qaab rustic ah kahor dhaqaaqa tufaaxa weyn.
Shirkad Talyaani ah oo dharka sameysa ayaa ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay shirkadda Apple adeegsiga magaca "Steve Jobs"
Apple ayaa awoodi kari wayday inay hesho shirkad talyaani ah oo dharka soo saarta si ay u joojiso adeegsiga astaanta Steve Jobs ee khadkeeda dharka
Apple waxay qorsheyneysaa inay furto Bakhaarkii ugu horreeyay ee Apple ee Sacuudi Carabiya sanadka 2019
Qorshayaasha mustaqbalka ee Apple waa inay ka furaan dalka Sucuudiga Dukaankii ugu horreeyay ee Apple, iyadoo ay ugu wacan tahay taageerada ay siiso dowladda dalkaas.
Apple ayaa hoos u dhigtay beddelka batteriga illaa $ 29 waxayna ku dhawaaqeysaa warka "slowgate"
Apple waxay hoos u dhigi doontaa beddelka batteriga illaa $ 29 sanadka oo dhan si loo fududeeyo kala-guurka oo looga fogaado gaabis sida ugu macquulsan.
Instagram waxay bilaabeysaa boostada cusub ee lagula taliyay quudkeena
Instagram waxay ku dareysaa qaar cusub, oo muran badan, talooyin ku dhaji quudkeena si aan waqti badan ugu qaadno khadka.
Muxuu ahaa xayeysiiska ugu wanaagsan ee Apple ee 2017?
Waxaan qiyaaseynaa inaad sidoo kale aragtay qaar badan oo ka mid ah ogeysiisyada Apple laakiin ... maxaa ku dhawaaqay ku dhawaaqista ugu wanaagsan sanadka 2017?
MacX DVD Ripper Pro, habka ugu wanaagsan ee lagu dillaaco DVD-ga loona beddelo faylasha fiidiyowga ah
Kala jeexjeexka DVD-yada qoyskeenna ama filimadayadu weligeed ka sahlan oo ka dhaqso badan kan MacX DVD Ripper Pro
Ka xakamee Spotify-kaaga Apple Watch, Nuuzic ayaa yimid
Oh Apple ... Waa maxay maskaxda si ay uga dhigto mid aad u adag Spotify iyo tartamayaasheeda meelaha kala duwan, wax macquul ah ...
Apple Watch waxay gaari kartaa 27 milyan oo unug oo la iibiyo sanadka soo socda
Tirooyinka Apple Watch waxay ku socdaan wadadii ay ku jebin lahaayeen dhammaan diiwaanadii la dhigay sannadka soo socda, sida laga soo xigtay ilaha silsiladda wax soo saarka.
Apple wuxuu ku dhamaan karaa sameynta processor-yada MediaTek maqnaanshaha Qualcomm
Maxaad u maleyn laheyd Apple sii kordhaya processor-ka MediaTek? Haddii aad taqaanid nidaamka waxaad toos u gariiri doontaa.
Maqnaanshaha HomePod, Kirismaskan 'Amazon Echo' ayaa hadiyad ahaan loo siiyay
Tani waa sida Alexa ay ugu sarreyso meesha ugu sareysa ee lagu soo dejiyo macruufka "App Store" mahadnaqa iibka alaabada Echo.
LiberTV hadda waa la heli karaa, JAILBREAK loogu talagalay Apple TV-gaaga 4K oo leh iOS 11-11.1
LiberTV hadda waa la heli karaa, waa qalab kuu ogolaanaya inaad JAILBILY Apple TV 4 iyo 4K oo leh tvOS 11 ama tvOS 11.1 lagu rakibo.
Mar dambe ma jiraan kooxo madow oo YouTube ah: barnaamijka IOS wuxuu la qabsan doonaa fiidiyowga qaabka shaashadda
Cusbooneysiinta soo socota ee YouTube ayaa macsalaameyn doonta nalka madow ee nacaybka iyo nacaybka leh, maaddaama fiidiyowyada ay la jaan qaadi doonaan qaabka shaashadda
Apple waxay kireysaa seddex maamulayaal Amazon ah barnaamijkeeda fiidiyowga
Dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ee Apple ee qaybta fiidiyoowga fiidiyowga ayaa ina tusaya sida ay u kiraysteen seddex maamuleyaal ah Amazon Prime Video
Eric Schmidt wuxuu iska casilay xilkii agaasimaha guud ee Alphabet
Iyadoo loo marayo war-saxaafadeed gaaban, Alphabet wuxuu ku dhawaaqay iscasilaadda agaasimaha guud ee Eric Schmidt ka dib 17 sano oo uu ku sugnaa Google iyo 3 Alphabet.
Gudaha ayaa u yimaada macruufka mana seegi kartid
Playdead waxay na siisaa guusheeda Gudaha iPhone, iPad iyo Apple TV. Shaqo farshaxanimo oo ku soo jiidan doonta adiga daqiiqadda ugu horreysa.
Apple waxay dacwad ku soo oogtay ka gaabinta aaladaha wata baytariyada duugga ah
Kooxaha adeegsadayaasha Mareykanka ayaa Apple ka dacweeya dhibaatooyinka bateriga ay ku hayaan aaladaha duugga ah.
Telegram X, oo aad loo habeeyay oo u gaar ah iPhone X
Telegram waxay soosaaraysaa barnaamij cusub "Telegram X" oo sifiican oofiican uguna dhaqso badan taasna sidookale waxaa laguhabeyn karaa mowduucyo madoow oo kufiican iPhone X
3D Touch gaabin: Liiska kama dambaysta ah ee dhammaan shaqooyinkiisa
Waxaan diyaarinay liistada kama dambaysta ah ee toobiyeyaasha 3D Touch ee hadda lagu isticmaali karo macruufka, haddaba soo hel iyaga hadda.
Apple waxay kordhin doontaa awoodda baytariyada iPhone-ka sanadka 2019-ka
Tufaaxa weyn ayaa soo saari doona batariyaal cusub oo ah iPhone-kiisa xiga maadaama ay la shaqeyn doonaan xaqiiqda la kordhiyay waxayna u baahan yihiin awood dheeri ah.
Readdle wuu raaligelinayaa oo wuxuu sii deynayaa cusbooneysiin kale oo deg deg ah Spark
Readdle wuxuu awood u yeeshay inuu dhaqso wax uga qabto oo wuxuu soo saaray cusbooneysi deg deg ah oo lagu xallinayo dhibaatooyinka qaarkood ee halista ahaa ee ka dhigayay dalabka mid aan la isticmaali karin.
Apple wuxuu yareeyaa iPhone-kaaga, kani ma wanaagbaa mise waa xun yahay?
Ma ka fiican tahay ama ka xun tahay in Apple ay gaabiso qalabkaaga si looga hortago in la xiro oo loo kordhiyo is-maamulkiisa? Dhibcaha iyo diidmada
Apple waxay sii wadaa qorista shaqaalaha adeegga baahinta fiidiyowga
Sida laga soo xigtay majaladda Variety, Apple waxay ballaarisay tirada maamulayaasha kuwaas oo qayb ka ah kooxda adeegga soo socota ee VOD.
Apple waxay xaqiijineysaa inay hoos u dhigeyso aaladaha leh dhibaatooyinka batteriga
Apple waxay xaqiijisay wixii aan horeyba u tuhmeynay kadib wararkii ugu dambeeyay: waxay hoos u dhigeysaa iphone-kii hore si loo daryeelo batteriga
Shirkad Shiineys ah ayaa Apple ka dacweysay Apple calaamadda App Store
Shirkad asal ahaan ka soo jeeda Shiinaha ayaa go'aansatay inay ku dacweyso shirkadda Cupertino khayaano ay ku sameysay astaanta App Store.
Furaha ereyada 'starwars' iyo 'daanyeer' ayaa si dhuumaaleysi ah ku gala sirta ugu xun sanadkii 2017
Sannad kasta, warbixin ayaa la daabacay iyada oo ereyada sirta ah ee ugu xumaa ee la isticmaalay 2017 ay ka mid yihiin "starwars", "hello" ama "daanyeer".
HomeKit wuxuu sii wadaa inuu ku daro shirkado, markan waxay ku xirantahay Sylvania
Soo jiidashada HomeKit ee sanadkii hore ayaa runtii muhiim ah haddii aan tixgelinno tirada shirkadaha ee ...
Apple wuxuu sii daayaa beta-ka labaad ee iOS 11.2.5
Laga bilaabo 19:00 waqtiga Isbaanishka noocaan macruufka ah ayaa loo heli karaa horumariyeyaasha.
Geekbench wuxuu xaqiijinayaa in waxqabadkaaga iPhone uu ku tiirsan yahay batteriga
Tijaabooyin badan ayaa xaqiijinaya in Apple ay si ula kac ah u gaabineyso aaladaha leh dhibaatooyinka batteriga si looga fogaado xirnaanshaha lama filaanka ah.
IPhone X wuxuu yareeyaa waqtiyada dirista laakiin waxaa jira shaki ku saabsan baahidiisa
Waqtiyada bixinta ee iPhone X ayaa hoos u dhacday mid falanqeeye ah ayaa ka faallooda inay noqon karto tilmaan bixiyaha baahida hoose xilligan.
Apple wuxuu dib u dhigaa imaatinka iTunes ee Windows Store sanadka soo socda
Apple ayaa ku dhawaaqday horaantii sanadkan in iTunes ay garaaci doonto Windows Store bisha Diseembar. Qoraal ahaan, waxay ku dhawaaqayaan inaysan imaan doonin illaa sanadka dambe.
Nidaamka Aqoonsiga Face-ka waligiis looma abuurin inuu martigaliyo wajiyo kala duwan muddada gaaban
Aqoonsiga Face waa nidaamka furitaanka ee iPhone X, waxaan hadda ognahay in la abuuray rajo la'aan muddo gaaban oo lagu daro wajiyo badan nidaamka.
Apple ma hagaajiyo cillad la xiriirta iMessages ee iOS 11.2.1
Cilad la xiriirta iMessages laguma hagaajin dhammaan cusbooneysiinta ay sii deysay Apple ka dib markii la sii daayay iOS 11.
Iibso maanta oo hel berri, waa qaaciddada cusub ee Apple ee iibkaaga kirismaska
Qaabka Amazon waa waxa Apple ay ka sameyso Mareykanka, Spain iyo wadamada intiisa kale ...
Fasaxaani wuxuu muujinayaa sida Siri uu u maqli lahaa annagoo xodxodanayna
Siri waxay baran kartaa inay dhawaqdo oo ay ogaato in aan kula hadlayno iyada oo la leeyahay xiiq. Tan waxaan ku ognahay mahadsanid patent ay daabacday Apple sanadkii 2016.
Google Play Music ayaa la cusbooneysiiyay si loo taageero iPhone X cusub
Google waxay sii wadaa inay cusbooneysiiso barnaamijyadeeda si ay ula jaanqaado iPhone X markanna waxay cusbooneysiisaa Google Play Music si ay u taageerto iPhone-ka cusub.
Disney waxay heshay inta badan Fox $ 52.400 bilyan
Shirkadda Walt Disney waxay xaqiijisay iibsashada qayb weyn oo ka mid ah Qarnigii 21-aad Dawacada oo u dhiganta $ 52.400 billion
Apple wuxuu kordhiyay damaanada Mac ilaa seddex sano oo New Zealand ah
Shuruucda cusub waxaan ku ogaanay in dadka reer New Zealand iyo Australiyaanka ah ay ku naaloon doonaan ilaa hal sano oo dheeri ah.
Apple wuxuu ku sharxayaa Finsar, abuurayaasha dareemayaasha VSEL
Sida muuqata shirkaddu aad ayey ugu faraxsan tahay natiijooyinka ay bixinayaan $ 390 milyan waxay umuuqataa hab wanaagsan oo lagu muujiyo.
Apple wuxuu sii daayaa betas-ka ugu horreeya ee iOS 11.2.5, watchOS 4.2.2 iyo tvOS 11.2.5
Saacado ka dib markii iOS 11.2.1 loo sii daayay dadweynaha, Apple ayaa sii daayay macruufka ugu horreeya ee 11.2.5 ee loogu talagalay horumariyeyaasha.
Lego wuxuu ku biirayaa bandwagon ARKit oo leh barnaamijka cusub ee AR, Lego AR-Studio
Ma dhihi karno Lego waa fadhiid macno kasta oo ka yar iyo haddii aan fiirino filimada dhaqdhaqaaqa, ...
Facebook wuxuu bilaabay saameynta adduunka iyadoo la kordhiyay xaqiiqda loogu talagalay Messenger
Facebook ayaan ka daalin nuqulida wax kasta oo xiriir la leh Snapchat, waana sababta ay u soo saarayso Saameynta cusub ee adduunka, saameynta cusub ee Facebook Messenger.
Instagram ayaa kuu oggolaan doonta inaad si deg deg ah u raacdo deg degga
Instagram waxay go'aansatay inay qaadato nidaamka hashtag si loogu oggolaado isticmaaleyaasha inay si dhaqso leh u helaan mowduucyada ay xiiseynayaan.
Apple waxay shaqo weyn ka qabatay injineernimada shaashadda OLED ee iPhone X
Madaxweyne ku xigeenka Apple ee suuqgeynta wax soo saarka ayaa xaqiijiyay in injineeradooda ay ku khasbanaadeen inay si adag uga shaqeeyaan shaashadda OLED ee iPhone X.
Google wuxuu bilaabayaa laba barnaamij oo cusub oo tijaabo ah oo sawir qaadis ah oo loogu talagalay IOS
Ragga ka socda Google waxay ku dhiirranayaan inay soo bandhigaan laba barnaamij oo cusub oo sawir-qaadis ah oo loogu talagalay iOS si loo ururiyo macluumaadka loona hagaajiyo shirkadda AI.
Anil Sethi wuxuu ka tagay qaybta caafimaadka ee Apple oo wuxuu helay Ciitizen
Anil Sethi, wuxuu ahaa madaxa qaybta Apple ee mas'uulka ka ah hagaajinta Caafimaadka ...
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan ka faa'iideysiga macruufka 11.1.2, ma yeelan doonnaa Jailbreak?
Google wuxuu soo bandhigayaa faahfaahin dheeri ah, laakiin waxa muhiimka ah ee ku saabsan wararka ayaa ah in la cadeeyo in ka faa'iideysigaan uu Jailbreak u dhawaanayo iOS 11, iyo in kale.
Google Home Max, oo si toos ah ula tartamaya HomePod, ayaa suuqa ku dhacaya
Google Home Max ayaa halkan u jooga inuu joogo, haa, si sax ah uma jaban yahay, aan aragno waxa ay ka kooban tahay.
Tuugada qaar ayaa 40 iphone ka qaata Apple Store magaalada Valencia
Dhaca ayaa ka dhacay dukaanka Colón Apple ee ku yaal Valencia, isla subaxnimadan iyo hadda ...
Iibinta Apple waxay ka hortageysaa noocyada Shiinaha
Shirkadda Cupertino waxay umuuqataa inay cimilo wanaagsan lajirto xilligan cusub ee khadka taleefanka dhexe.
YouTube ayaa bilaabi kara adeeg fidin muusig oo cusub
Bisha soo socota ee Maarso, YouTube waxay bilaabi kartaa adeeg muusig oo u gooni ah si ay kaagala tartanto adiga Spotify iyo Apple Music
Kuwani waa jawaabihii ugu horreeyay ee suurtagal ah iPhone XC
Apple waxay bilaabi kartaa sanadka soo socda iPhone XC oo leh shaashad LCD iyo tiknoolajiyad la mid ah iPhone X, laakiin aad uga jaban.
Apple waxay kudareysaa shaashadda anteenada ee New Los Angeles Apple TV 4K
Apple ayaa soo saartay shaashad cusub oo dhanka cirka ah TV-ga Apple TV 4K kaas oo magaalada Los Angeles laga arkayo hawada.
IOS 11.2 waxaa ku jira cillad amniga HomeKit ah, laakiin hadda waa la hagaajiyay
Waxay ogaadeen cillad xagga amniga ah oo la socota HomeKit oo Apple horay u qayb ahaan u xallisay iyada oo sugaysa xalka ugu habboon ee dhowaan iman doona
Flickr waa mid ka mid ah bogagga ugu caansan sawirrada ee internetka. Telefoonada casriga ah ayaa ah qalabka ugu isticmaalka badan. Iyo nooca ugu caansan waa iPhone
Haddii aad tahay qof raacsan oo daacad ah shirkadda 'Spotify' waxaad nasiib u leedahay tan iyo markii adeeggu uu furay degel si loo ogaado xogtaada waxqabadka inta lagu gudajiray sannadka 2017-ka.
Newton Calendar, kalandar cusub oo loogu talagalay macruufka
Laga soo bilaabo isla horumarayaasha Newton, macmiilka boostada, Newton Kalandarka ayaa noo yimaada si uu u buuxiyo midka hore. Interface A fudud oo toos ah.
Xayeysiiska Apple «The Rock + Siri. Isku ururi maalintaada »waa xayeysiiska siddeedaad ee loogu daawashada badan yahay YouTube-ka
Apple wuxuu bilaabay xayeysiinta: Rock + Siri. Ku cadaadi maalintaada, jilaaga caanka ah, iphone 7 iyo Siri sida ...
IOS 11 horey ayaa loogu rakibay 59% aaladaha ay taageerayaan
Qaddarka korsashada ee iOS 11 waxay joogtaa 59%, 7 dhibcood oo ka sarreeya bishii hore, in kasta oo xogtu ka hooseyso tan iOS 10.
Instagram ayaa ku dhawaaqday inay leedahay in ka badan 25 milyan oo xisaab ganacsi
Instagram-ka ayaa gaadhay 25 milyan oo xisaab ganacsi, taas oo ay shirkaduhu ku qabsadaan dareenka macaamiisha.